1c Rental - high speed futhi akukho glitches.
Okwamanje kutholakala hhayi kuphela ukuthenga imikhiqizo lokuphathwa ekudalweni nokuqukethwe, kodwa futhi ukuze iqashwe 1c. Nale isevisi ungakwazi ukufinyelela "1c: Enterprise 8" nge-Internet. Lokhu kukuvumela ukuba usebenzise uhlelo ngaphandle hardware yabo kanye ne-software, nakho konga inkampani imali.
izinkampani Server anikeza izinkonzo ezinjalo efakwe maphakathi idatha futhi kwenziwe kutholakale abasebenzi ibhizinisi emahoreni angu-24 ukusuka kunoma yiliphi iphuzu emkhathini.
Qasha 1c 8 has eziningi eziwusizo, kuhlanganise:
- ukungabi khona izindleko ukuthengwa imishini;
- ukuhlinzekwa iseva izinsiza;
- ukusebenza okuphezulu iseva 1c;
- Asikho isidingo sokuqondisa uhlelo, kanye isipele nokubuyekeza imininingwane yolwazi;
- Online ukufinyelela yolwazi inkampani kubo bonke abasebenzi abasebenza ukude;
- Ukufinyelela akugcini esikhathini. Imininingwane itholakala abasebenzi ubusuku nemini.
inkokhelo ukuqasha incike Inani labasebenzi abasebenza ngohlelo.
Qasha 1c nge-Internet esihambelana izinhlangano namahhovisi akude, emafektri, izitolo, amahhovisi noma amanye amahhovisi. izinkampani Rental futhi singaba usizo kabi abasebenzi abaku- yebhizinisi noma on-site umsebenzi. Umsebenzi ekhaya zingenza nge iqashwe 1c. Ngaphezu kwalokho, le sevisi izoba wusizo ukuqaliswa izinqubo zebhizinisi, lapho ukuxhumana nabalingani kwenzeka kwelinye Imininingwane egciniwe.
Uhlelo 1c sokuqasha inikeza ukutholakala eliphezulu. Izinkampani ezihlinzeka amasevisi sokuqasha 1c, ifakwe amaseva professional, izinga lomsebenzi okuyinto eqhathanisa kahle iseva Inani noma workstations elula avame olwathengwa izinkampani ezincane. Ngaphezu kwalokho, uma kwenzeka ukwehluleka 1c esibulalayo, yonke idatha yenkampani lilondolozwe, futhi abuye abuyele kulo isimo ezisebenzisekayo, abasebenzisi bangaqhubeka ukusebenza kusukela iphuzu lapho bebehlala khona: waphazanyiswa ukwehluleka.
Inhlangano ukufinyelela ukuphela ivumela abasebenzi izinkampani babe amaphasiwedi awo siqu ukufinyelela database noma nini nanoma kuphi, uma kukhona i-Internet.
inkonzo Universal ivumela ukungena kokukude kusuka kunoma iyiphi iplatifomu, kuhlanganise MacOS,-Android, i-Windows, i-Linux, i-iOS. Ikhwalithi nesivinini uhlelo akuxhomekile amandla workstation. Ngenxa yalokhu, ukusebenza nge akude iseva 1c kuyoba njengoba esitebeleni njengoba kwaba njalo endabeni ka-phumela kusukela kukhompyutha yehhovisi, noma enikeziwe usebenzisa namanye amadivayisi ezifana ne-iPad.
On umsebenzisi ngamunye lwabelwe ethile kanzima sediski, futhi esimweni okweqa quota, ngamunye GB ezengeziwe kuzokhokhelwa ngokuvumelana yamanani lenkampani enikeza iseva iqashwe.
Qasha iseva 1c ukuze kusheshiswe umsebenzi izikhathi 500, kusukela ngo-amandla iseva ukugcina inikeza okusheshayo idatha yokulayisha amadokhumenti ethwele nokubika.
Ukukhokhela izinsizakalo kuyinto encike ngqo kwi Inani labasebenzi nge-akhawunti ahlukahlukene futhi ngesikhathi esifanayo abasebenza iseva, kanye nesidingo ubuyekeza database Imininingwane yenhlangano. Uma izisebenzi zisebenze ngezikhathi ezahlukahlukene ngosuku, kungenzeka ukuba ugcine inkonzo iseva eqhelile, njengoba ungakwazi ukuthenga i-akhawunti eyodwa abasebenzi ababili noma ngaphezulu labatawusebentisa ke kuvula. Buyekeza imininingwane yolwazi kuwufanele ethile imali, kodwa database akudingi ukwesekwa, kungase kube khona izinto eziningi angenamkhawulo.
Ngakho, ngosizo 1c iqashwe awukwazi kuphela ukuqinisekisa ukusebenza okunokwethenjelwa ngaphandle kokuphazamiseka kanye ukulahleka kolwazi, kodwa futhi ulondoloze imali ukuthengwa isofthiwe, imishini ekhethekile futhi ukukhokhela umsebenzi wesistimu.
Imifino ngesiShayina. Ungadliwa izifundo yesibili
Indlela yokwenza indlu enhle eyenziwe amakhadibhodi
Tuscany Amahhotela, Tours